Abuurka image ah waxay ka dhigan tahay in meesha laga saaro qayb ka mid ah image ka, sidoo kale si ay u qariyaan wax aadan rabin dhagaystayaasha in ay arkaan ama ay xoogga saaraan qaybaha kala duwan gudahooda image ka. Sida Photoshop noo ogolaadaa in ay weli noola images, Final Cut Pro X noo ogolaadaa in ay noola dhaqaaqin video clips, sida aad baran doontaa in this article.
Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aan muujiyo sida tan la sameeyo, waxaan u baahan tahay si ay u sharxaan mid xaqiiqda aad muhiim u ah oo ku saabsan video: video oo dhan isticmaala waxa loo yaqaan "Qaraarka go'an." Qaraarka go'an ka dhigan tahay in-qeexidda sare video waxaa mar walba soo bandhigay mid ka mid ah laba tirada:
Si ka duwan weli images kaas oo noqon kara kumanaan pixels dhinac ah, video clips yihiin xiran mid ka mid ah labadan tirada galay. Taas macnaheedu waa in haddii aad noola video clip ah, si meesha looga saaro wax aad u ma jecli, ee pixels hartay waxaa inta badan ku ballaadhisay in la buuxiyo jir ah. Dalagyada aad u badan iyo video clip eegi doonaa tashwiish, blocky, iyo geesaha eegi doonaa jaranjarada-casilay.
Waxaan idin tusin doonaa laba siyaabood oo aad ku noola video clip ah ee qodobkan, mid haysaa tayo leh image sare laakiin yaraynaysaa tirada jir (oo loo yaqaan "falinjeeerka") oo kale ah in ka buuxa jir ah la image laakiin hoos u tayo image (loo yaqaan "siii"). Waxaad ka heli soo qaado oo mid ka mid fiican oo aad u.
Jaritaanka waa hab ka mid ah ay ka saareen qaybo ka mid ah video clip ah oo aan badalayn size ee clip ah. Tani xajisto xaddiga ugu sarreeya ee tayada image.
Tusaale ahaan, halkan image ah - mahadcelinayaan Pond5 (www.pond5.com). Aan niraahno waxaan dooneynaa inaan hoosta ka xariiqo ka barn oo aan samada.
Habka ugu fudud ee ay tan u sameeyaan waa in ay guji icon ee geeska hoose ee bidixda ah daawadayaasha iyo dooran "Dalag."
Tan waxay ku tusaysaa qalab abuurka in daawadayaasha ka.
Riix badhanka goo u Jeediya hab goo. (Maqaalkani waxa uu ka hadlayaa jar oo Dalag. Baan ku qarin doonaa hawlgeli Ken Burns maqaal uu mustaqbalka.)
Midhadh mid ka mid ah dhibco buluug iyo jiidi si ay u qariyaan qaybo ka mid ah ku yiilleen. Guud ahaan waan ku qabsoomayn geeska ah, laakiin wax dhibic buluug ah ku samayn doono.
FIIRO GAAR AH: Press iyo qaban muhiim ah Xulashada halka jiidaya in jiidi geesaha ka soo horjeeda ama geesood. Press iyo Qabo muftaaxa Shift si qasbaan goo in ay saamiga arrin la mid ah sida jir ah.
Jiid geesood kale ama geesaha in ay sii jar image ka.
Marka aad image ka jaro sida aad u rabto in aad, riix "qabtay" button ee geeska midig sare uga baxdo falinjeeerka hab.
Haddii ay maya tahay clip kale ay ka hooseeyaan clip ka jaro, asalka noqon doonaa madow.
Laakiin, waxay run ahaantii ma aha mid madow, waa hufan. Haddii aad clip kale waxaa hoos ku qoran, oo aad arki doonaa clip hoose hoose image ay iska jaro.
Jaritaanka noo ogolaadaa in ay qarin qaybo ka mid ah video clip ah, oo aan badalayn tayada image of clip in uu weli yahay. Si kastaba ha ahaatee, mar walba falinjeeerka abuuraa qaybaha hufan gudahood image ah.
Abuurka oo noo ogolaaneysa in ay doortaan kaliya qayb ka mid ah video clip ah, iyada oo aan la abuuro wax kasta oo qaybaha hufan, LAAKIIN, waxaa hoos tayada image.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aan dooran kartaa in aad noola image ah:
Riix icon dalagga, sida aynu kor ku muujiyey
Click Right-mouse (ama Control-click) gudaha daawadayaasha iyo dooran
Nooca Shift + C
* In ay Isbatooraha> Video tab> Dalag (Doorashadan waxay bixisaa sax ugu, laakiin waa ugu yaraan dareen in la isticmaalo)
Haddii aad dooratay doorasho kasta marka laga reebo Isbatooraha ah, riix badhanka Dalag in daawadayaasha ka.
Hadda, jiidi button buluug ah in mid ka mid ah geesood. Maxaa yeelay, abuurka, ka duwan falinjeeerka, qabanaysa jir ah la qaybtii image aan dooro, aan dhaqaaqi karaan oo kaliya geesood iyo sanamkii waxaa had iyo jeer kala xajmi u waafaqayaan muuqa of our xigaan.
Iska yaree qaab tiro Final sare ee daawadayaasha oo muujinaysa sida ay u badan image ayaa la jaray.
Reposition jir ku taratamaan gudaha laydi iyo jiidayeen.
Marka aad ku faraxsan yahay natiijada ay yihiin, riix batoonka samayn meel qarsoon saxda sare.
Fiiro u yeelo in qaybta soo xulay ee image hadda buuxiyo jir ah. Inkasta oo ay jirto clip hoos noo clip ay yaryihiin, annaga oo aan u aragno.
Iyo, haddii aad eegto si dhow, aad arki doonaa in sanamkii ay yaryihiin waa jilicsan (blurrier) ka badan asalka ah iyo geesaha u badan tahay inay noqon jaranjarada-casilay.
Si aad dib image ah ay yaryihiin dib ugu goobaha ay default, furo Isbatooraha iyo riix arrow yar qalooca si xaq ah erayga "Dalag."
Jaritaanka loo isticmaalo si ay u qariyaan qaybo ka mid ah sanam oo superimpose badan image kale.
Abuurka waxaa loo isticmaalaa in ay qaabeeyaan image ah, dhihi ka shot a dhexdhexaad ah oo ku dhow-up, laakiin halis ah oo kacsan Jilcinta image ah. Xeerka guud waa in wax yar ka siii waa OK, laakiin aadan wax badan ma noola.
Waxaan u isticmaali labada hababkan si joogto ah in aan tafatir u gaar ah.
> Resource > FCP > Final Cut Pro X: Sida loo Dallaga Image ah